Tag: nwebi edemede
Isi okwu na - abụkarị ihe ikpeazụ onye na - emepụta ọdịnaya na - ede, ha anaghị enweta ọgwụgwọ okike oge ụfọdụ. Agbanyeghị, mmejọ e mehiere mgbe isi akụkọ akụkọ na-egbu mgbe mgbe. Ọbụna mgbasa ozi ahịa kachasị mma ga-efu site na isi okwu ọjọọ. Usoro kachasị mma nke mgbasa ozi, usoro SEO, usoro ịre ahịa ọdịnaya, na mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-kwa-otu nwere ike ikwe nkwa naanị otu ihe: Ha ga-etinye isi gị n'ihu ndị nwere ike ịgụ ya. Emechaa, ndị mmadụ ga-pịa ma ọ bụ na ọ bụghị